မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: လတ်တလော စစ်မှုထမ်းနေတဲ့ ကိုရီးယား မင်းသားတွေ...
C-box မှာ Kim Rae Won အကြောင်းမေးတဲ့သူရှိတာနဲ့ ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မင်းသားတော်တော်များများ စစ်ထဲရောက်နေတာ သတိရလို့ ရောက်နေတဲ့သူတွေကို အားလုံးနဲ့ ဝေမျှချင်သေးတယ်... ခုတစ်လော မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ သူတို့ စစ်ရေးတင်းမာနေတော့ သူတို့အတွက် စိုးရိမ်နေသေးတယ်... တကယ်ဖြစ်ရင်တော့ စစ်ထဲရောက်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်ကသူပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပြီး အားလုံးအတွက် စိုးရိမ်ရတာပါပဲ... (ပြောပြောချင်ဘူး... အဲဒိ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကို မုန်းစရာအကြောင်းတွေက မနည်းဘူး...) စစ်မှုထမ်းရတဲ့ မင်းသားတွေ ဘယ်အချိန်ပြန်ထွက်လာမလဲသိချင်ရင်တော့ သူတို့ စစ်ထဲဝင်သွားတဲ့နေ့ကို ၂နှစ်ထပ်ပေါင်းလိုက်ပါ...
Kim Jae Won (Hwan Jin Yi, Wonderful life, My love Patzzi)
သူကတော့ မြန်မာပြည်ကို အလည်လာဖူးတဲ့ မင်းသားပါ... သူဟာ ၂၃ရက် မတ်လ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက် စစ်ထဲဝင်သွားပါပြီ... သူစစ်ထဲဝင်တဲ့နေ့မှာ သူ့ပရိတ်သတ်ပေါင်း ၂၀၀ခန့်က လာရောက်နှုတ်ဆက်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်...
Jo In Sung (Dirty Carnival / What happen in Bali)
သူကတော့ သရုပ်ဆောင်အတော်လေးကောင်းပင်မဲ့ ကားသိပ်မထွက်လို့ ကျွန်မ မျှော်နေရတဲ့ မင်းသားပါ... သူဟာ ဧပြီလ ၄ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စစ်မှုထမ်းဖို့ ၀င်သွားပါပြီ... သူတို့ ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအတွက် စစ်မှုထမ်းကာလကို နောက်ဆုတ်ဖို့ လျှောက်ထားခွင့်ရှိတဲ့အတွက် သူ့နောက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ကား "Frozen Flower" movie promotion event အတွက် လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်.. ပုံမှန်သူဝင်ရမဲ့ အချိန်က ဇန်န၀ါရီလ ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်... သူစစ်ထဲဝင်တဲ့နေ့မှာ ပရိတ်သတ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်နဲ့ သတင်းသမားများက လိုက်ပို့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်... သူက လေတပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်... (သူသာ လေတပ်ဝတ်စုံနဲ့ဆို အတော်လိုက်မှာ...)
အောက်မှာတွေ့ရမဲ့ပုံတွေကတော့ သူ့ စစ်တပ်ထဲက ဘ၀ပုံလေးတွေကို ဝေမျှထားတာပါ... တခြားမင်းသားတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် သူ့ကြည့်ရတာ စစ်တပ်ထဲမှာ ပျော်နေသလိုပါပဲ... သူနဲ့ သူ့အဖွဲ့သားတွေ ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ mussels တွေဖမ်းနေတဲ့ ပျော်စရာ စစ်သားဘ၀ကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်...
Jo ဟာ ခုလို mussels တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူဖမ်းလို့ရတာကို အတော်လေး အံ့သြနေပြီး ယခုလိုနောက်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်... " တကယ်လို့သာ ဒီအလုပ်ကို လုပ်စားရရင်... မင်းသားအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်ရမှာလား"
သူဟာ ခုဆို ဆာဂျင် (sergeant) အဆင့်ကို 2010 September မှာ တိုးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး ခုဆိုရင် air force က military band မှာ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေမြဲပါပဲ.... (Jo In Sung အမြန်ဆုံး စစ်ထဲက ထွက်လာပြီး ရုပ်ရှင်ကားကောင်းကောင်းလေးတွေ ရိုက်ဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်...)
Kim Jeong Hoon (singer/actor) (Goong, Witch Yoo Hee, Fog Street)
Goong (aka Princess Hours) ကားထဲက နုနုညံ့ညံ့လေး ချောတဲ့ ဒုတိယမင်းသား (အဆိုတော်/ရုပ်ရှင်မင်းသား) Kim Jeong Hoon ဟာ ၂၈ရက် ဧပြီလ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စစ်မှုထမ်းဖို့ စစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်သွားပါပြီ... ဂျပန်၊ ကိုရီးယား ၊ တရုတ်ပြည်မှ သူ့ပရိတ်သတ်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော် လာရောက် ပို့ဆောင်ကတာကို တွေ့ရပါတယ်... (သူက ဂျပန်သီချင်းတွေလဲ ဆိုတော့ ဂျပန် ပရိတ်သတ်များတာ မဆန်းပါဘူး)
ဒီပုံကတော့ သူစစ်ထဲရောက်ပြီးမှ ပုံပါ
Lee Dong Gun (Sweet 18, When it's at night, Smile again)
Sweet 18 ထဲက မင်းသား Lee Dong Gun ဟာ စစ်မှုတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် ၁၅ရက် ဇွန်လ ၂၀၀၉ မှာ စစ်ထဲကို ၀င်ရောက်သွားပါပြီ... သူ့ အပြင်မှာနေရတဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ ၁၄ရက်နေ့မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်... သူ့မိသားစုကလွဲပြီး သူစစ်ထဲဝင်မဲ့နေ့ ၂ရက်မတိုင်မှီအထိ အပြင်ကိုထုတ်ဖော် မပြောခဲ့တဲ့အတွက် Lee က ယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်.. "ကျွန်တော့ပရိတ်သတ်တွေ ကျွန်တော့်ကို ပို့ဖို့အတွက်နဲ့ အဝေးကြီးက လာရမှာ စိုးလို့ တမင်မပြောပဲနေခဲ့တာပါ... အဲဒိအတွက် အားလုံးလဲ ၀မ်းမနည်းဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..."
Kim Rae Won (My love Petzzi, Love story in Harvard, Attic Cat)
သူကတော့ Kim Jae Won နဲ့အတူ My Love Petzzi မှာ သရုပ်ဆောင်ဖူးတဲ့ မင်းသားပါ... Love Story in Harvard မှာ အတော်လေး လူကြိုက်များခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်... သူလဲ ၁၃ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၀၉ နေ့လည် မှာ စစ်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ သွားပါပြီ... ကင်မရာအဖွဲ့တွေနဲ့ သူ့ပရိတ်သတ် အနည်းငယ်လိုက်ပို့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်... ပရိတ်သတ်အများစုကတော့ ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန်ကပရိတ်သတ်တွေပါပဲ...
Joo Ji Hoon (Goong aka Princess Hours, The devil)
Princess Hours ထဲက ပထမ မင်းသား Joo Ji Hoon ကို သိကြမှာပါ... သူဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနဲ့ ၂၀၀၉ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ တရားစွဲဆိုခံရပြီး... သူ့ ပြစ်မှုအတွက် ဒဏ်ငွေ ၃သိန်း ၆သောင်း Won (approximately only US$280).... လူမှုဝန်ထမ်းအလုပ်(Communities service) ချိန်ပေါင်း ၁၂၀နာရီ ထောင်ဒဏ် ၆လနဲ့ အစမ်းစောင့်ကြည့်ကာလ ၁နှစ် ချခံခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်... (အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အစမ်းစောင့်ကြည့်ကာလ ၁ နှစ်မှာ သူလိမ်လိမ်မာမာနေလျှင်နောက်ထပ်ပစ်မှု မကျူးလွန်လျှင် ထောင်ဒဏ် ၆လမှ လွတ်ကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်...) သူနဲ့ အတူမိတဲ့ အပေါင်းအပါတွေထဲမှာ သူ့ပြစ်ဒဏ်က အနည်းဆုံးပါပဲ... သူ့ကို ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကလဲ သူ့အမှုအတွက် Petition လုပ်ပြီး ပြစ်မှုကို လျော့ချ ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သလို... သူ့ရှေ့နေကလဲ သူဟာ ဒီတစ်ကြိမ်ပဲ ပထမဆုံး သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောင်တကြီးစွာရနေကြောင်း ဘာညာ သာရကာ ပြောလိုက်ပုံရပါတယ်... (အမှန်တော့ နာမည်ကြီးမင်းသားဆိုတော့လဲ အပြစ်လျော့မှာပေါ့နော်...)
သူ့ Probation ကာလ ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ သူဟာ စစ်မှုထမ်းဖို့ လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်.. သူဟာ ၁နှစ်လုံးလုံး သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေခဲ့တဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ်မှ လွတ်ကင်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်... သူသာ စစ်မှုထမ်းတာဝန်ကို ကျေပွန်ခဲ့ရင် သူဟာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ ပုံရိပ်ကို တဆင့်တိုးပြသလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်ရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ပြန်ရဖို့လဲ လွယ်ကူဖို့ရှိတယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်...
Lee Dong Wook (My Girl, Partner)
My Girl ထဲက မင်းသား Lee Dong Wook ဟာ သြဂုတ်လ ၂၄ရက် ၂၀၀၉ မှာ စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့ ထွက်ခွာသွားပါပြီ... သူရိုက်နေတဲ့ movie Bean Paste ကို စစ်ထဲမ၀င်ခင်နေ့ ၂၃ရက်နေ့မှာ အပြီးစီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်.... သူ့ကို လိုက်ပို့တဲ့ ပရိတ်သတ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်...
Lee Jun Ki (My girl, Iljemae, Time between dog and wolf)
Lee Jun Ki in The King and the Clown as an Actress
စစ်ထဲဝင်သွားတဲ့ မင်းသားထဲမှာ အောင့်သက်သက်နဲ့ အတော်လေး နစ်နာသွားတဲ့ မင်းသားကတော့ Lee Jun Ki ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်... သူဟာ iljemae ဇာတ်ကားနဲ့ ယခင်ရှိပြီးသားနာမည်ထက်တောင် လူကြိုက်များလာအပြီးမှာ ဆက်လက်ပြီး ရိုက်ကူးဖို့ ကားတွေ တန်းစီနေပါတယ်... ၁၉၈၂ မွေးတဲ့သူတွေအတွက် (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များအတွက်သာ... အပြင်လူများကတော့ ဒိထက် အသက်ငယ်ငယ်မှာပဲ စစ်ထဲဝင်ကြတာများပါတယ်) ဒီနှစ်ကုန်လောက်မှ စစ်မှုထမ်းဖို့ စာရောက်ရမှာဖြစ်ပင်မဲ့ သူ့ကိုတော့ နောက်ထပ် ရုပ်ရှင်တကား စစရိုက်ဖို့ပြင်နေစဉ်မှာပဲ စာရရှိခဲ့ပါတယ်... သူကလဲ မေလ ၃ရက် ၂၀၁၀ မှာ စစ်မှုထမ်းဖို့ ၀င်ရောက်မဲ့အကြောင်းကို ကြေငြာခဲ့ပါတယ်....
အဲဒိအတွက် သူ့ရဲ့ ရိုက်ကူးဖို့ သဘောတူညီထားတဲ့ နောက်ကားတွေဖြစ်တဲ့... Faith နဲ့ Grand Prix ကားတွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်... Grand Prix ကားဟာဆိုရင် မြင်းပြိုင်ပွဲကားဖြစ်ပြီး မင်းသမီးချော Kim Tae-hee နဲ့ ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်... တချို့အပိုင်းတွေကို စတင်ရိုက်ကူးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မင်းသားစစ်ထဲဝင်ရသောကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေလဲ မင်းသားအစားထိုးဖို့ အလောတကြီးရှာဖွေရတယ်လို့ သိရပါတယ်...
Lee ဟာ သူ့ စစ်မှုထမ်းကာလကို နှစ်ကုန်အထိ နောက်ဆုတ်ဖို့ လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး...
သူ စစ်ထဲဝင်တဲ့နေ့မှာ လိုက်ပို့တဲ့ သူပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး သူ့ပရိတ်သတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်...
(ကျွန်မဟာ သူ့ကို My Girl ကတည်းက စတင်သိရှိခဲ့သော်လည်း မိန်းကလေးနဲ့ အရမ်းတူတဲ့အတွက် သိပ်မကြိုက်ခဲ့ပင်မဲ့... သူ့ movie The King and the Clown နဲ့ iljemae ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေမှာ သူသရုပ်ဆောင်တာကို မြင်ပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ မင်းသားတယောက်အနေနဲ့ လက်ခံသဘောကျခဲ့တာပါ... သူယခုလို တဟုန်ထိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာ ခုလို စစ်မှုထမ်းဖို့ ၀င်လိုက်ရတာ အရမ်းနစ်နာတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်.... ဘာပဲပြောပြော သူထွက်လာပြီး နောက်ထပ်ရိုက်မဲ့ ကားတွေကို ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ စောင့်စားနေပါတယ်... ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ်ပါဘူး...)
Kim Ji-suk (Personal Taste, Likeable or not)
Likeable or not က မင်းသား... တစ်လောက ပြသွားတဲ့ Personal Taste ကားထဲက အမြင်ကပ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီး ရည်းစားဟောင်း သရုပ်ဆောင်သွားသူ Kim Ji Suk ဟာ သူ့ ရဲ့ နောက်ဆုံး Project Personal Taste အပြီး ၄ရက် အကြာ မေလ ၂၄ရက် ၂၀၁၀ မှာပဲ စစ်မှုထမ်းဖို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပါတယ်... သတင်းသမားများနဲ့ သူ့ပရိတ်သတ် အနည်းငယ်လိုက်လံပို့ဆောင်ကြပါတယ်...သူဟာ Entertainer unit ကို လျောက်ထားဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ မတ်လ ၇ ရက်နေ့လောက်မှာ စစ်ထဲက ပြန်ထွက်လာဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်တဲ့...
Lee Wan (Tree of Heaven, Snow White, Swallow the sun)
နာမည်ကြီး မင်းသမီး Kim Tae Hee ရဲ့ မောင်အရင်း မင်းသားချော Lee Wan ဟာလဲ စစ်ထဲဝင်ဖို့ စာကို ရုတ်တရက်ရရှိခဲ့ပါတယ်... သူ့ management ကပြောကြားချက်အရ သူ့နောက် Project အတွက် စီစဉ်နေတုန်းအချိန်မှာပဲ စာကို လက်ခံရရှိခဲ့တာပါ... Project တွေကို ခုမှ စတင် စဉ်းစားဆဲဖြစ်တာကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ Kim Nam-gil တို့ Lee Jun Ki တို့လို ကားရိုက်ရင်းတန်းလန်းနဲ့ ဒုက္ခမရောက်အောင် ခုကတည်းက ၀င်ထားလိုက်တာကောင်းပါတယ်တဲ့... သူဟာ ၁၂ ဇွန်လိုင်လ ၂၀၁၀ မှာ စစ်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်...
Kim Nam Gil (Bad Guy, Queen Seon Deok)
ခုတစ်လောကမှ ပြသွားတဲ့ Bad Guy ထဲက မင်းသား Kim Nam Gil ဟာ Bad Guy ကားထဲက သူပါသမျှ အခန်းကို အမြန်ဆုံးရိုက်ကူးပြီး ၁ရက်သာနားကာ နောက်ရက် ဇွန်လိုင်လ ၁၅ရက် ၂၀၁၀ မှာ စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့ သွားပါပြီ... သူလဲ သူ့ကို အချိန်တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့သော်လဲ ပထမတစ်ကြိမ်လဲ တောင်းဆိုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် မရဖို့များခဲ့တဲ့အတွက် သူနဲ့ Bad Guy ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေအတွက် အတော်လေး ပြဿနာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်...
အဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက် သူပါတဲ့ အခန်းတွေကိုပဲ အရင်ရိုက်ထားဖို့ဆိုတာကလဲ movie မဟုတ်ပဲ Drama ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အခက်အခဲရှိပါတယ်... သူစာရတဲ့အချိန်မှာ အပိုင်း ၁၀ထိ ရိုက်ကူးပြီးပါပြီ... ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးဟာ ထုတ်လွှင့်တဲ့ ရက်ထက် ရှေ့ပြေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ တကယ်တမ်း သူ စစ်ထဲဝင်ရမဲ့နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ အပိုင်းကမှ စုစုပေါင်း episode 20 ကို episode 11ထိပဲ ပြသရသေးမှာပါ... အဲဒိအတွက် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ၁လအတွင်း အပြီးရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်... ခေါင်းဆောင်မင်းသား စစ်ထဲဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာ အပိုင်း ၂၀ ယာထားရာက အပိုင်း ၁၇ ပိုင်း ဖြင့်သာ ဖြတ်ချလိုက်ရပါတယ်... (အဲဒါကြောင့် အဲဒိကားဟာ ကျွန်မအမြင်မှာ တစ်ကားလုံး တောက်လျှောက်ကောင်းလာပြီး ဆုံးခါနီး ၁၀ မိနစ်လောက်ကျမှ အရေးမပါတဲ့ Playful kiss ထဲက မင်းသမီးနဲ့ အဆုံးသတ်ပြစ်လိုက်တာ အလွန်ကိုမှ မုန်းပါတယ်... ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ဇာတ်သိမ်းကို ပြင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်..)
သူစစ်ထဲဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အခန်းတွေကို အမြန်ဆုံးရိုက်ရတဲ့အတွက် သူနဲ့တကွ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပါ မအိပ်မနေရိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်... ဒါတောင် တစ်ချို့အခန်းတွေ (ဥပမာ... နောက်ကျောပဲ ပါတာတို့ဘာတို့ကတော့) တခြားမင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ အစားထိုးရိုက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်....
Shin Dong Wook (Soulmate, Cloud Stair, Wish uponaStar)
Soulmate နဲ့ Wish uponaStar ထဲက အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့ မင်းသားချော Shin Dong Wook လဲ ဇွန်လိုင်လ ၂ ရက်နေ့က စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့ သွားပါပြီ... သူ့ management rep ကပြောကြားတာကတော့ သူ notice ကို ဇွန်လကုန်လောက်မှာရရှိခဲ့ပြီး သူ့ကိစ္စတွေကို အစီစဉ်လိုက် လုပ်နေခဲ့ပြီး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပရိတ်သတ်ဆီပြန်လာခဲ့မဲ့ အကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်...
Soulmate ကားထဲမှာ သူ့ကို ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ စတင်ကြိုက်ခဲ့ရပြီး Wish uponastar မှာ စိတ်ထားနူးညံ့တဲ့ ညီအနေနဲ့ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်လေး သရုပ်ဆောင်ခဲ့တော့လဲ စွဲခဲ့ရပြန်ပါတယ်.... ခုတော့ စစ်သားကေတိုတိုလေးနဲ့ ရိုးရိုးကောင်လေးတစ်ယောက်လိုပါပဲ... ဒါနဲ့ soulmate ကား မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်လိုက်ကြနော်... မဗေဒါတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်...
Kim Ji Hoon (Wish uponaStar, Love and Marriage, Joseon- X file)
ခုအချိန်ထိ နောက်ဆုံး စစ်ထဲဝင်သွားတဲ့ မင်းသား Kim Ji Hoon ကတော့ လတ်တလော ရိုက်ပြီးတဲ့ Joseon - X file ဇာတ်လမ်းတွဲကို လက်စသတ်အပြီး အောက်တိုဘာ ၄ရက် ၂၀၁၀ မှာ စစ်မှုထမ်းဖို့ ၀င်ရောက်သွားပါပြီ... သူဟာ ခု ပြီးခဲ့တဲ့ Joseon - X file ထဲက မင်းသမီးနဲ့ Scandal ထွက်နေတဲ့အတွက် သူ စစ်ထဲဝင်တဲ့နေ့မှာပဲ ခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်... "ဒီနေ့တောင် ကျွန်တော့ကို သူလိုက်ပို့ဖို့ သူ့ကို တောင်းဆိုခဲ့သေးတယ်... " နောက်မှ မင်းသားက ရီလျှက် "ဒီကောလ ဟာလ ဟာ မမှန်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်ကြားမှာ ရှောင်နေစရာမလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်....ဒါပေမဲ့ အထင်လွဲစရာတွေ မဖြစ်အောင်တော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ ခေါ်ခဲ့ဖို့ ပြောလိုက်တယ်.."
သူ့ Twitter account ကတော့ http://twitter.com/jiraishin99 တဲ့... ဒါပေမဲ့ ခု သူစစ်ထဲမှာဆိုတော့ သိပ်တော့ update ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့...
ကဲ... ဒါပါပဲ... ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မင်းသားတွေ ၁၉၇၈ခုနှစ်မွေး လောက်ကနေ ၁၉၈၄ ခုနှစ် မွေးလောက်တော်တော်များများက စစ်ထဲရောက်နေပါတယ်... ဒါနဲ့ Rain တစ်ယောက် စစ်မှုမထမ်းချင်လို့ ပတ်ပြေးနေတာ... ခုတော့ ပြေးလို့မရတော့ဘူး... မကြာခင်ဝင်ရတော့မယ်ကြားတယ်... စောစောစီးစီးဝင်ရင်တောင် စစ်နဲ့ လွတ်အုံးမယ်... ခုတော့ သူတို့ တိုင်းပြည် အခြေအနေက သိပ်ကောင်းတာမဟုတ်.... ဘာပဲပြောပြော ကျွန်မကြိုက်တဲ့ မင်းသားလေးတွေ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပြန်လည်ထွက်လာနိုင်ပြီး ဇာတ်ကားကောင်းတွေ အများကြီးရိုက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရတာပဲ.... အော်.... နောက်တက်လေးတွေ... Jung Keun Suk တို့ လီမင်ဟိုတို့ 2pm တို့... ကျန်တာတွေ လဲ နောက် ၄ နှစ် ၅နှစ် နောက်ဆုံးထားပြီး သွားကြရအုံးမှာပဲ...
Posted by mabaydar at 6:47 PM
ah..i like alll of them..and i miss them..haha..i just duno the actor from soulmate..i saw him in wish uponastar..but i hate the actress..so i stop watching it :D
OMG... Shin Dong Wook is one of my favorite actor... You should watch Soulmate... Italittle bit boring.. but then enjoyable... enjoyable most for last3episode...
11/05/2010 9:21 PM
ကြိုက်တဲ့မင်းသား အတော်များများရောက်နေတာပဲ။ ဒါကြောင့်ပျောက်နေကြတာ.. အခုလို သိရတာ သိပ်ကျေးဇူးတင်တာပဲ။ ကိုယ်သာဆို ရှာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သူတို့ဆီကမင်းသားတွေကတော့ အချိန်တန်တာနဲ့ အလျှိုအလျှို စစ်မှုသွားထမ်းကြတယ်နော်။
တို့ဆီမှာလည်း ခုဆိုရင် ပြည်သူ့အချစ်တော်ဆိုတာတွေက ပါတီထဲဝင်ကြသလိုလို၊ ပါတီ မဲဆွယ်နေကြသလိုလို၊ ပါတီထောင်ကြတော့မလိုလို၊ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုတွေဖြစ်နေကြတာပေါ့ကွယ်။ =)
ကျေးဇူးပါညီမရေ။ စစ်မှုထမ်းသက်ပြည့်လို့ ပြန်ထွက်လာတဲ့ မင်းသားတွေ အကြောင်းလည်း ရေးပါဦး
ဒီ postကိုဒုတိယ အကြိမ်ပြန်ဖတ်သွားတယ်။ Pretty Boy တွေအများကြီးနဲ့ သူတို့သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ dramaတွေ movie တွေကိုတခါထဲ သိလိုက်ရလို့။အားရင် အသစ်တင်ပါအုံး။